के–के गर्न चाहन्छन् देउवा ? - inaruwaonline.com
के–के गर्न चाहन्छन् देउवा ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २५, २०७४ समय: २:३९:०६
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पद बहाली गरेपछि सार्वजनिक क्षेत्रको सदाचार नीतिको मस्यौदा बनाई पेस गर्ने प्रस्ताव सदर गर्नुभएको छ । साथै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधानबमोजिम अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालय स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने निर्णय पनि गर्नुभयो ।
तीनै तहको निर्वाचन माघ ७ भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यस्तै सर्वाजानिक निकायबाट जनतालाई सहज सेवा प्रवाह, शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति र पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा राखेको छ । बैठकले नागरिकको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई सहज बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अाजकाे गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।